Dr. Dickson M. Mwakangalu, Munyori paRuzivo SUCCESS
Dr. Dickson Mtungu Mwakangalu, kuManchester Metropolitan University MPH, uye Moi University MD akapedza kudzidza, inyanzvi yezvehutano hweveruzhinji ine ruzivo rwekugona kubata nekuita zvirongwa zvevanaamai, achangoberekwa uye utano hwemwana, kuronga mhuri, hutano hwekubereka, hutano hwevechiri kuyaruka, chikafu, HIV/AIDS, nezvimwe zvirwere zvinotapukira. Parizvino ari kushanda seMutevedzeri Mukuru weBato reAFYA TIMIZA, a USAID-inotsigirwa neFP/RMNCAH, chikafu, uye WASH chirongwa uye chakashanda mune mamwe mabasa akasiyana anosanganisira Public Health Nyanzvi kuUS Centers yeChirwere Kudzora nekudzivirira., Chikamu cheGlobal HIV neTB muKenya, uye Director weTechnical Services kuPathfinder International, Kenya pakati pevamwe. Ane ruzivo rwakadzama pamusoro pekudzivirira zvirwere, Clinical management, kuitwa kweprojekiti, kutarisa uye kuongorora, kunyanya mune zvigadziriso zvisina kunaka. Ane shungu nekuchengetedza hupenyu nekuvaka masisitimu kuti ave nechokwadi chekuwana mukana wehutano. Kupererwa nebasa, anoda kupedza nguva nemhuri, kurima, kushambira nekufamba.
Ichi chinyorwa chinopfupikisa chiitiko chekubatanidza kuronga mhuri uye hutano hwekubereka (FP/RH) muchirongwa che HEALTH FULL, yakaitwa neAmref Health Africa muKenya. Inopa manzwisisiro kune tekinoroji vanopa mazano uye maneja ehurongwa izvo ...
chat_bubble0 Comment kuonekwa18051 Views